Apple dia mamoaka Beta vaovao an'ny HomePod 15 lozisialy hanamboarana ny hafanana tafahoatra | Vaovao IPhone
Apple dia mamoaka rindrambaiko Beta vaovao an'ny HomePod 15 hanamboarana ny hafanana be loatra
Apple dia tsy orinasa lavorary. Mazava ho azy fa toy ny orinasa lehibe hafa, na miezaka mafy manao zavatra tsara aza ianao, indraindray dia misy zavatra tsy tadiavinao "zavatra" iray izay misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny fitaovana marika rehetra.
Fa ny azonao antoka dia raha manao fahadisoana ianao na kely aza, hamaha haingana azy io. Ora iray lasa izay dia namoaka kinova vaovao an'ny HomePod 15 Software ao anaty beta izy ireo izay manamboatra ny olan'ny hafanana be loatra an'ny HomePods izay nametraka ny kinova beta teo aloha. Bravo.
Vao namoaka kinova beta vaovao an'ny Apple i Apple Rindrambaiko HomePod 15 izay mamaha ireo olana niseho andro lasa izay, ary efa niresaka momba izany eto mitovy
Ity kinova vaovao an'ny rindrambaiko ity dia tonga taorian'ny fitarainan'ny mpampiasa HomePod marobe fa nametraka ny HomePod 15 beta izy ireo ary nahita olana sy olana tampoka tamin'izy ireo overheating amin'ny fitaovanao.
Ity rindranasa beta HomePod ity dia napetraka tamina mpampiasa vitsivitsy fotsiny tamin'ny voalohany, satria izy no zaraina amin'ny fanasan'ny orinasa. Ka na ny mpandraharaha na ny mpampiasa farany dia tsy voadona amin'ny olana tafahoatra.
Raha mpampiasa efa nampiasa a fomba hafa ho an'ny ofisialy hametraka ity rindrambaiko beta ity, ary noho ny hafanana be loatra dia niharan'ny fahasimbana ny fitaovanao, dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana azy i Apple. Mila mitandrina tsara ianao rehefa mametraka rindrambaiko beta, satria mety hiteraka lesoka izany, ary ny sasany misy vokany lehibe.
fomba ofisialy, Tsy nilaza i Apple tsy misy na inona na inona momba ny vahaolana amin'ny olana tafahoatra ao anaty naoty miaraka amin'ny fanavaozana. Saingy noho ny hafainganan'ny famoahana kinova beta vaovao raha oharina amin'ilay teo aloha dia tsy isalasalana fa nanitsy io hadisoana io izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » HomePod » Apple dia mamoaka rindrambaiko Beta vaovao an'ny HomePod 15 hanamboarana ny hafanana be loatra
Safari ao amin'ny iOS 15, ireto ny vaovao ao amin'ny iPhone sy iPad
UK Apple Ultimatum: Mety hanjavona noho ny fehezan-teny 'tsy eken'ny ara-barotra'